ကြှနျမ . . . တဖွေးဖွေးနဲ့ ဒဏျရာကငျးအောငျ တညျတညျတံ့တံ့လေး နထေိုငျတတျလာရုံပါ ။ - Tameelay
ကြှနျမ မာနကွီးတာ မဟုတျဘူး တညျတညျတံ့တံ့ နထေိုငျနတောပါ ကိုယျ့ကို မလိုအပျမှနျးသိတဲ့ အရပျတှကေို ဘယျလောကျထိပဲ သှားခငျြသှားခငျြ မသှားဖွဈတော့ဘူး ။
ကိုယျ့ကိုယျ မလိုအပျဘူးဆိုတဲ့လကျတှေ ဘယျလောကျပဲ လိုလိုခငျြလိုခငျြ အောကျကနြောကျကခြံပွီး မဆှဲထားဖွဈတော့ဘူး ။
ကြှနျမ အတိတျတှကေို တှေးပွီး မရှကျခငျြတော့ဘူးလေ နောငျတတှလေဲ မရှိခငျြတော့ဘူး ဒါတှကွေောငျ့ တညျတညျ တံ့တံ့လေး နထေိုငျနတောပါ ။
မာနတှေ ခပြွီး ပေါငျးကွသငျးကွတဲ့အခါ ကြှနျမကို သိပျပေါတယျလို့ ထငျသှားကွတယျလေ ။
သူ့နရော ကိုယျ့နရောဆိုတာ နားလညျလာကွတော့ဘူး ရောလှနျးလို့ ခေါငျးပျေါတကျခငျြလာခဲ့ကွတာ ဒီအတှကျ ကိုယျ့ပုံစံနဲ့ကိုယျပဲ နတေယျ အပေါငျးအသငျးမရှိလဲ နပေါစတေော့ တဈယောကျတညျးနမေယျ အလိုလိုကျအကွိုကျဆောငျပွီးမှ ရလာမယျ့ အပျေါယံ ခငျမငျမှုမြိုးတှေ ကြှနျမ မလိုခငျြလာတော့ဘူး ။
ကိုယျ့ဘကျက ဘယျလောကျပဲ အောကျကြို့ အောကျကြို့ အနာကငျြခံပွီး ဘယျလောကျ ဆှဲထား ဆှဲထား ထှကျသှားမယျ့လူက ထှကျသှားမှာပဲဆိုတာ ကြှနျမ တဖွေးဖွေး နားလညျသဘောပေါကျလာပါပွီ
မနခေငျြလို့ လှညျ့ထှကျဖို့ ပွငျနတေဲ့လူတဈယောကျကို သိက်ခာတှေ အကခြံပွီး ဆကျဆှဲထားလို့လဲ လကျတှကေ ပိုပွီး မွဲလာတယျလို့ မရှိပါဘူး
ကိုယျ့အတှကျ ပိုပွီး နာကငျြလာရတာတှေ ရှိလာတာမြိုးပါ အတိတျကို ပွနျတှေးတဲ့အခါတိုငျး ကြှနျမ မရှကျခငျြတော့ဘူး လမျးခှဲပွီးသှားရငျတောငျ ကြှနျမ သိက်ခာရှိရှိပဲ ကနျြခဲ့ခငျြတယျ မနခေငျြတော့တဲ့အခါ ထှကျသှားပါ ရငျအကှဲခံလိုကျမယျ အပငျပနျးခံပွီး ဆကျပွီးဆှဲထားမနတေော့ဘူး ။
အားနာပါးနာ နဲ့ ကွိုဆိုတဲ့အရပျတှေ အားနာပါးနာနဲ့ ချေါတဲ့ အရပျတှကေို အလိုကျကနျးဆိုးမသိ ကြှနျမ မသှားတော့ဘူး ကိုယျ့ကို တကယျလိုအပျပါတယျဆိုတဲ့ အရပျတှနေဲ့ တမျးတမျးတတ မြှျောနတေဲ့ အရပျတှကေိုပဲ ကြှနျမ ခွဦေးလှညျ့ဖွဈတော့တယျ မပွုံးခငျြပဲ ပွုံးနတေဲ့ အပွုံးတှကေ အမောပိုပွီး စို့စတောလေ ။
ကြှနျမ . . . မာနကွီးလာတာ မဟုတျဘူး တညျတညျတံ့တံ့လေး နထေိုငျတတျလာတာပါ အခွအေနတှေေ အကြိုးအကွောငျးတှေ တဖွေးဖွေး ဆကျစပျပွီးတှေးတတျလာရုံလေးပါ ။ အမြားကွီး မြှျောလငျ့မထားတော့ဘူး ငပေါအဖွဈမခံနိုငျလို့ သိပျပွီးမရောတော့ဘူး မကွိုဆိုပဲ သှားတတျတဲ့ ခွလှေမျးတှကေို တဖွေးဖွေး ထိနျးခြုပျတတျတာလာပါ ။
ကျွန်မ မာနကြီးတာ မဟုတ်ဘူး တည်တည်တံ့တံ့ နေထိုင်နေတာပါ ကိုယ့်ကို မလိုအပ်မှန်းသိတဲ့ အရပ်တွေကို ဘယ်လောက်ထိပဲ သွားချင်သွားချင် မသွားဖြစ်တော့ဘူး ။
ကိုယ့်ကိုယ် မလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့လက်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ လိုလိုချင်လိုချင် အောက်ကျနောက်ကျခံပြီး မဆွဲထားဖြစ်တော့ဘူး ။
ကျွန်မ အတိတ်တွေကို တွေးပြီး မရှက်ချင်တော့ဘူးလေ နောင်တတွေလဲ မရှိချင်တော့ဘူး ဒါတွေကြောင့် တည်တည် တံ့တံ့လေး နေထိုင်နေတာပါ ။
မာနတွေ ချပြီး ပေါင်းကြသင်းကြတဲ့အခါ ကျွန်မကို သိပ်ပေါတယ်လို့ ထင်သွားကြတယ်လေ ။
သူ့နေရာ ကိုယ့်နေရာဆိုတာ နားလည်လာကြတော့ဘူး ရောလွန်းလို့ ခေါင်းပေါ်တက်ချင်လာခဲ့ကြတာ ဒီအတွက် ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ်ပဲ နေတယ် အပေါင်းအသင်းမရှိလဲ နေပါစေတော့ တစ်ယောက်တည်းနေမယ် အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီးမှ ရလာမယ့် အပေါ်ယံ ခင်မင်မှုမျိုးတွေ ကျွန်မ မလိုချင်လာတော့ဘူး ။
ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ အောက်ကျို့ အောက်ကျို့ အနာကျင်ခံပြီး ဘယ်လောက် ဆွဲထား ဆွဲထား ထွက်သွားမယ့်လူက ထွက်သွားမှာပဲဆိုတာ ကျွန်မ တဖြေးဖြေး နားလည်သဘောပေါက်လာပါပြီ
မနေချင်လို့ လှည့်ထွက်ဖို့ ပြင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို သိက္ခာတွေ အကျခံပြီး ဆက်ဆွဲထားလို့လဲ လက်တွေက ပိုပြီး မြဲလာတယ်လို့ မရှိပါဘူး
ကိုယ့်အတွက် ပိုပြီး နာကျင်လာရတာတွေ ရှိလာတာမျိုးပါ အတိတ်ကို ပြန်တွေးတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်မ မရှက်ချင်တော့ဘူး လမ်းခွဲပြီးသွားရင်တောင် ကျွန်မ သိက္ခာရှိရှိပဲ ကျန်ခဲ့ချင်တယ် မနေချင်တော့တဲ့အခါ ထွက်သွားပါ ရင်အကွဲခံလိုက်မယ် အပင်ပန်းခံပြီး ဆက်ပြီးဆွဲထားမနေတော့ဘူး ။
အားနာပါးနာ နဲ့ ကြိုဆိုတဲ့အရပ်တွေ အားနာပါးနာနဲ့ ခေါ်တဲ့ အရပ်တွေကို အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ ကျွန်မ မသွားတော့ဘူး ကိုယ့်ကို တကယ်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အရပ်တွေနဲ့ တမ်းတမ်းတတ မျှော်နေတဲ့ အရပ်တွေကိုပဲ ကျွန်မ ခြေဦးလှည့်ဖြစ်တော့တယ် မပြုံးချင်ပဲ ပြုံးနေတဲ့ အပြုံးတွေက အမောပိုပြီး စို့စေတာလေ ။
ကျွန်မ . . . မာနကြီးလာတာ မဟုတ်ဘူး တည်တည်တံ့တံ့လေး နေထိုင်တတ်လာတာပါ အခြေအနေတွေ အကျိုး​အကြောင်းတွေ တဖြေးဖြေး ဆက်စပ်ပြီးတွေးတတ်လာရုံလေးပါ ။ အများကြီး မျှော်လင့်မထားတော့ဘူး ငပေါအဖြစ်မခံနိုင်လို့ သိပ်ပြီးမရောတော့ဘူး မကြိုဆိုပဲ သွားတတ်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို တဖြေးဖြေး ထိန်းချုပ်တတ်တာလာပါ ။
ကျွန်မ . . . တဖြေးဖြေးနဲ့ ဒဏ်ရာကင်းအောင် တည်တည်တံ့တံ့လေး နေထိုင်တတ်လာရုံပါ ။